Abakhi Bezinto Zokuhlunga - Ifektri Yezihlungi Zase-China Nabahlinzeki
I-cartridge yesihlungi sensimbi engagqwali yenziwe nge-single-layer noma i-multi-layer mesh yensimbi. Inani lezendlalelo kanye ne-mesh eyakha i-mesh incike ezimweni zesevisi ezihlukene kanye nokusetshenziswa. Ukunemba kokuhlunga ukugxila okuphezulu, ukucindezela okuphezulu nokuqondile okuhle. Yenziwe ngensimbi engagqwali.
Amapuleti anezimbobo zensimbi engagqwali angakwazi ukucubungula imikhiqizo yezinhlobo ezihlukahlukene kanye nokusetshenziswa, njengamapayipi anezimbobo zensimbi, izihlungi zepayipi ezinezimbobo zensimbi, njll., ezisetshenziselwa ukwakha, amakhemikhali, izimayini, ukucwenga uwoyela nezinye izimboni, ngokusetshenziswa okungapheli.
Isihlungi sekhatriji yensimbi engenasici yensimbi engagqwali yangokwezifiso
Imidiya yesihlungi ye-Pleated Filter Elements iyinsimbi engagqwali i-sintered fiber ezwakalayo kanye nendwangu yensimbi engagqwali elukiwe.
Ukuhlunga Koketshezi Lwezimboni kwe-304/316 Isici Sesihlungi Sokubhasikidi Wensimbi Engagqwali
Izihlungi zikabhasikidi zingasefa inhlobonhlobo yoketshezi ukuze kugcinwe okuqinile cishe kwanoma yimuphi usayizi. Zonke izihlungi zikabhasikidi kulula ukuzihlakaza nokuhlanza. Izinto zokuhlunga ubhasikidi zesilinda esisodwa, isilinda esiphindwe kabili, amasilinda amaningi kanye nomklamo wokugoqa zinganikezwa ngokuya ngezidingo zohlelo lokusebenza.
I-304/316 I-Sintered Metal Filter Disc , I-Rimmed Filter Disc 0.5 -100 Micron
I-Stainless steel filter mesh metal rimmed ring disc (isihlungi sediski, amaphakethe okuhlunga, idiski yesihlungi se-wire mesh). Uhlobo Lwempahla: Insimbi engagqwali enezikhala, inezikhala zethusi, ezinezikhala zethusi, indwangu yocingo emnyama, inetha lenickel, i-monel mesh, i-hastelloy mesh, i-inconel mesh njll. Ama-SUS304 Stainless Steel Mesh Disc anamarimu asetshenziswa kakhulu njengesikrini sokucwenga embonini ye-petroleum. Refining Screen Grade Stainless Steel Rimmed Mesh Discs amaphekhi ayisicaba acutshungulwe kusukela kundwangu yemeshi engu-304, 304L noma engu-316 ss ene-anti-acid enhle kakhulu kanye nentuthwane...
Isikrini esiyindilinga esiyindilinga sensimbi engagqwali, iphakethe le-mesh yezikrini ze-extruder
I-Plain, i-twill, i-Dutch plain, i-Dutch twill, i-Dutch reverse, amaphilisi amahlanu. Noma ipuleti elincane elinezingqimba eziningi elakhiwe ngale mesh ye-SS.
insimbi engagqwali/ uthayela slotted esinezimbobo isihlungi sesikrini sensimbi
Izinto ezijwayelekile zifaka i-US304 (AISI304), SUS316 (AISI316) kanye ne-SUS316L (AISI316L). Insimbi ekhethekile ye-alloy, i-Hastelloy, i-Monel ne-Inconel ingasetshenziswa ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Insimbi engagqwali Johnson insimbi engagqwali v-wire umthombo screen
Ilungele ukwenziwa kukashukela, ukumba amalahle, ukugaywa kwezimbiwa phansi, usimende, izimboni kanye nokuhlanza indle emadolobheni.
Isihlungi esisetshenziswa ezimbonini zikamasipala nezimboni zokuhlanza imfucuza singathuthukisa ukusebenza kwesicacisi ngokunciphisa kakhulu umthwalo.
Isetshenziselwa ukususwa kwe-fiber embonini yesitashi.
Umkhiqizo unokuqedwa okuhle kwendawo, okubushelelezi futhi akunaburr, ukuguquguquka okuqinile, akukho ukuguquguquka kwemvelo - 45 degree, akukho ukubola, akukho ukugqwala, okungeyona into enobuthi nokunganambitheki, indawo ebushelelezi, akukho kuklwebheka, akukho burr, kuqinile futhi kuhlala isikhathi eside.
Ukwethulwa kwe-barbecue mesh:
isikrini esiyisikwele esenziwe ngocingo lwensimbi engagqwali kanye nensimbi yensimbi elukiwe noma eshiselwe, bese sicutshungulwa sibe yi-barbecue mesh.
Stainless steel 304/316 multilayer sintered metal isihlungi isikrini
I-Multilayer sintered metal mesh iwuhlobo olusha lomkhiqizo wokuhlunga onamandla amakhulu emishini kanye nesakhiwo esiqinile esiphelele, esenziwe nge-multilayer metal elukiwe ezinezikhala ngokusebenzisa umkhawulo okhethekile wokufakwa kwe-lamination kanye nezinqubo ze-vacuum sintering.